Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyeha Gawaarida Gawaarida USB ee Jumlada ah. BWOO
• La jaan qaadi kara fiilo kasta oo USB -ga ku shubaysa, aad u adag
• Tayo summad fiican leh
• Aad u yar, aad uga yar suulkaaga
• Nalalka LED -ka ayaa ku ogeysiiya marka aaladaha ku xiran ay lacag -bixinayaan
• Cabbirka yar iyo naqshad gaar ah
• Badbaadinta korontada, korontada, iyo daadka
1. Waxaad ogaan doontaa in lacag -bixinta ay "socoto" oo leh tilmaame LED ah.
2. Iswaafajinta caalamiga ah micnaheedu waa inaad ku dallaci karto taleefan kasta oo casriga ah: Apple, Huawei, Samsung, LG, Google iyo in ka badan.
3. Awood badan oo lacag -bixin ah oo isku mar lagu dallaco laba qalab.
4. Ka dhig muraayada gaarigaaga mid qurux badan oo leh naqshad cad oo xarrago leh.
Degdeg ugu dallac laba qalab hal mar
BWOO double USB charger car charger wuxuu leeyahay laba dekedood oo A A ah, oo kuu oggolaanaya inaad si habboon ugu dallacdo aalado badan isku mar, xeedhahan baabuurku wuxuu bixiyaa awood isku -dhafan oo ah 12 watts, oo leh hal deked 1amps, deked kale 2.4 amps si aad ugu dallacdo qalabkaaga dhaqso iyo badbaado , xeedhuhu wuxuu si toos ah ugu dhejiyaa dekadda lacag -bixinta baabuurkaaga, oo tilmaameha LED -ka ayaa iftiimiya si uu kuu ogeysiiyo marka qalabkaagu lacag -bixinayo.
Universal oo la jaan qaadi karta in lala shaqeeyo fiilo kasta oo USB A ah
Labada dekedood ee fiilooyinka baabuurka ee USB -ga waa kuwo caalami ah, oo kuu oggolaanaya inaad ku lamaanto fiilo kasta oo USB A ah, illaa aad haysato fiilada ku habboon, waxaad ku isticmaali kartaa xeedho taleefannada casriga ah, kiniiniyada, kaamirooyinka, baakadaha la qaadan karo ee gacanta lagu qaato, afhayeenka bluetooth, smartwatch iyo dheeraad ah. Iyada oo leh naqshaddeeda is -haysta, xeedho si fudud ayuu ugu dhex dhacaa boorsada dhabarka, boorso, ama sanduuq -gacmeed.
Nabadgelyada oo leh hawl goyn otomaatig ah
Baabuurkaan USB-ga ah ee laba jibbaaran ee ku dhisan chip-ka caqliga leh si loo hubiyo ku-dallacaad aamin ah inta lagu dallacayo aaladahaaga, xeedho si otomaatig ah ayuu u goyn doonaa maaddaama aaladda si buuxda loo dallaco, had iyo jeer ku hay aaladahaaga moobiilka qaab caam ah oo lacag-bixin ah.
BO-CC16 oo ay ka buuxaan sanduuq warqad tafaariiq ah+khariidad leh isku xirnaanta, waxaad si cad uga arki kartaa xeedho sanduuqa naqshada daaqadda.
2. Haddii aad sigaar cabto, xeedho -hayaha baabuurku wuxuu qabsan karaa isku -xirka khafiifka sigaarka waqti kasta, si aad u yareysid sigaarka oo aad u ilaaliso tayada hawada ee gaariga!
Hore: Warshadaha Taleefoonada Gacan -hayaha Taleefoonka ee Shiinaha Wireless -ka ah
Xiga: xeedho telefoonka wireless ee baabuurka